Sidee shaqo looga helaa Tirana? - ALinks
Sidee shaqo looga helaa Tirana?
June 9, 2021 Antika Kumari shaqo, safarka
Qabashada dambe ee Albania ee dhaqaalaha suuqa xorta ah waxay sababtay kororka furitaanka shaqooyinka ee Tirana. Maaddaama ay sii kordhayaan maalgashiga shisheeye ee dalka, warshado badan ayaa si xawli ah u sii ballaaranaya.
Tirana, waa caasimada Albania oo hoy u ah dhaqaalaha iyo warshadaha dalka, waa xudunta dhaqaalaha wadanka.
Beeraha ayaa ka mid ah ganacsiyada ugu muhiimsan ee Albania, laakiin warshadaha dawooyinka ayaa ahmiyad gaar ah u leh, warshadaha soo saara dharka iyo birta, iyo waliba adeegyada, ayaa dhamaantood si weyn uga qeyb qaadanaya barwaaqada dhaqaale ee dalka.
shaqo doonis Tirana ah?
Mid ka mid ah shaqooyinka ugu caansan ee hore ee loogu soo haajiray Tirana waa barashada Ingiriisiga oo ah luuqad shisheeye, laakiin dhaqaalaha oo sii xoogeysanaya, waxaa sidoo kale jira isbadalo dhinacyo kala duwan ah.
Websaydhyada sida https://www.learn4good.com/jobs/tirana/albania/, Soco Abroad waxay faa'iido u yeelan kartaa ajaanibta-inay-isku dayaan inay shaqo ka helaan Tirana, gaar ahaan macallimiinta, halka Xirfadlaha iyo Dua Pune sidoo kale waa xalal waxtar u leh shaqooyin kala duwan.
Waxay kuu noqon doontaa xalka ugu fudud ee aad ku bari karto Ingiriisiga (haddii aad tahay qof ku hadla Ingiriisiga hooyo taasi waa). Dhammaan bogagga hoos ku taxan si caddaalad ah ayaa loo barbardhigi karaa waxayna bixiyaan tiro badan oo ah barashada fursadaha shaqo ee Ingiriisiga. Ka fiiri goob kasta si aad u aragto haddii ay jiraan wax shaqo ah oo ka furan Albania. Sidoo kale, fiiri shaxdan cajiibka ah ee ka socota Akadeemiyadda Caalamiga ah ee TEFL, taas oo muujineysa inta lacag ee macallimiintu ka kasban karaan quruumaha kala duwan ee adduunka.
Shaqada ESL: Qaab dhismeedku ma ahan kan ugu soo jiidashada badan, laakiin yaa u baahan degel websaydh qurxoon marka ay jiraan shaqooyin badan oo barashada Ingiriisiga ah oo laga xulan karo?
Wadarta ESL: Isku-xir kale oo aad u adag, laakiin shaqooyin badan oo shaqooyin ah oo loogu talagalay jagooyinka waxbarista ee dalalka kale.
Dave wuxuu qabtaa shaqo aad u fiican oo ah isu geynta qaar ka mid ah shaqooyinka ugu waaweyn ee laga diro adduunka Makhaayada ESL.
Tesall waa isu soo aruuriyaha shaqo ee macallimiinta.
Ruqsadaha Shaqada ee Tirana
Ruqsadaha shaqada Albaaniya waxaa bixisa Wasaaradda Daryeelka Bulshada iyo Dhallinyarada. Dadka ajaanibta ah waxay badanaa ka heli doonaan caawimaad shirkadooda helitaanka a ogolaanshaha shaqada, laakiin waxay badanaa u baahan doonaan inaad fiiso marka hore hesho.
Oggolaanshaha shaqada ayaa sida caadiga ah u baahan dukumiintiyada soo socda:
warqad shaqo bixiyuhu u diray
nuqul ka mid ah heshiiska shaqada oo la caddeeyey lana turjumay,
Nuqul ka mid ah baasaboorka shisheeyaha (haddii ay khuseyso),
shan sawir, iyo sidoo kale
awood qareen gaar ah ee ganacsiga bixinaysa adeegga.
UNDP kama qaado wax dalab ah, ka baaraandeg ah, ama lacag tababar ah meel kasta oo ah habka shaqaalaynta shaqaalaysiinta iyada oo loo eegayo siyaasad ahaan. Fadlan tag this page haddii aad wax su'aalo ah ka qabto ogeysiisyada bannaan ee laga yaabo inaad heshay.
UNDP hadda waxay ka warqabtaa ogeysiisyada banaan ee been abuurka ah ee lagu faafinayo internetka iyadoo looga dan leeyahay in dadka laga dhaadhiciyo inay isdiiwaangaliyaan tababarka ayna bixiyaan lacag
Jardiinooyinka Qaranka ee Mareykanka
Sida loogu guuro Malayisa oo ka socota Hindiya:
Miyaad tahay Maad-u-Abuuraha Astaamaha? Hadday jawaabtu haa tahay, markaa waa inaad ogaataa sida daabacaaddu u shaqeyso sawirada !!
Waxyaabaha la iibsado ka hor safarka Yurub, liiska hubinta